Tag - အနုပညာရှငျကုနျသညျမြား
27.12.2018 07:57 ငွေအကြောင်း လှုံ့ဆော်ပေးမည့် ဇာတ်လမ်း ၅ပုဒ်
ဘောင်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့ပြီး၊ ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့ကြသည့် ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန်ရောင်းဝယ်သူများ
အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း လှုံ့ဆော်မှု အနုပညာရှငျကုနျသညျမြား ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည် အောင်မြင်မှု
09.03.2018 09:46 ရစ်ချက် ဒန်းနစ် - commodity (အဖိုးတန်ပစ္စည်း) ထရိတ်ဒင်း ပညာရှင်ကြီး
ဒီနေ့အချိန်အခါမှာဆို အင်တာနက်ပေါ်မှာ Forex ဈေးကွက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘ၀ အနိမ့်အမြင့်၊ အောင်မြင်မှု စိတ်ပျက်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ သင်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီးသဘောကျမဲ့ ဘ၀အကြောင်းတွေ ဆယ်ဂဏန်းလောက် ရှာတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့…
20.09.2017 11:10 ထရိတ်ဒါတွေဖြစ်မှန်း သင်လုံးဝမထင်ထားမိတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်များ
သာမာန် Forexထရိတ်ဒါတစ်ယောက်ကနေပြီး ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ကြယ်ပွင့်အဆင့်အထိတက်လှမ်းသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင် ယုံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး. ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုးက တကယ်ရှိနေပါတယ်."ဘယ်သူတွေက နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်မဖြစ်မီအချိန်မှာ ထရိတ်ဒါလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို သိရှိသွားအောင် ဖတ်ရှုလိုက်ပါ.
16.02.2018 09:10 Ingeborga Mootz ဆိုတာ အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့ Forex လောကရဲ့ အတောက်ပဆုံးကြယ်ပွင့်တွေထဲက တစ်ယောက်ပါ.
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Forex ထရိတ်ဒင်းလောကကို စ၀င်လာပြီဆိုရင် စိတ်တက်ကြွစေဖို့အတွက် အားကျဖွယ် အောင်မြင်တဲ့ထရိတ်ဒါတွေရဲ့အကြောင်းကို ဖတ်ရှုလေ့လာထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…
02.03.2018 07:01 Ed Seykota - ကွန်ပျူတာထရိတ်ဒင်းရဲ့ ရှေ့ဆောင်တစ်ဦး.
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Forexမားကတ်ကြီးတစ်ခုလုံးက လုံးဝကိုပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောစရာကိုမလိုတဲ့ လူတိုင်းသိကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ…
16.03.2018 10:37 Nassim Taleb - ထူးချွှန် သချာင်္ပညာရှင်၊ ထရိတ်ဒါ။
Nassim Nicholas Taleb ဟာ ပြောင်မြောက်တဲ့ ခေတ်မှီတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ တခြားသူတွေလုံးဝမလုပ်ဖူးတဲ့ သို့မဟုတ် လုံးဝမလုပ်ရဲတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အမြတ်များစွာရှာဖွေခဲ့ရတာကြောင့် တစ်ချက်လောက် လေ့လာကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီဘောကြော့သူဌေးကိုတော့…
22.02.2018 07:44 Steven Cohenဆိုတာ Forex မားကတ်မှာ ကဗ္ဗည်းတင်လောက်တဲ့ ထရိတ်ဒါတစ်ဦးပါ.
လူတစ်ယောက်ဟာ ထရိတ်ဒင်းလောကထဲကို ၀င်လာပြီဆိုတာနဲ့ Forexမားကတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုထရိတ်ဒါကများ အံ့အားသင့်ဖွယ် လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို သိချင်ကြပါတယ်…